Bottlerocket: inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kugadzirisa midziyo | Linux Vakapindwa muropa
Bottlerocket: inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kugadzirisa midziyo
Amazon Web Services yakapihwa Chipiri chapfuura yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu akadanwa "Bottlerocket"kunyanya yakagadzirirwa kumhanyisa midziyo pamushini chaiwo kana maseva epanyama, maererano nechiziviso chakatumirwa paAWS blog.
Iyo sisitimu ine-imwe-nhanho maitiro ekutsigira otomatiki meseji Bottlerocket yakavakirwa pakuparadzirwa kweLinux que es yakafanana nemapurojekiti akaita seCoreOS's Linux Container chirongwa, iyo yakabva yanyangarika uye sisitimu yekushandisa yakagadziridzwa kumidziyo yeGoogle. Iyo yemahara inoshanda sisitimu parizvino iri mukutarisa kwekuvandudza, maererano neiyo AWS blog post.
Kwazvino, timu yeBottlerocket inotarisa pakushandisa sisitimu senge inomiririra inoshanda sisitimu pane AWS EKS Kubernetes masumbu.
"Tinotarisira kugamuchira mhinduro uye kuenderera mberi nekushanda pane mamwe mashandisiro!" Chikwata chakanyora mune yavo posvo paGitHub.
Sekureva kwenyaya iyi, Bottlerocket yakagadzirirwa kuitira kuti nzvimbo dzakasiyana dzemakomputa egore uye maorchestrator emidziyo azotsigirwa mune ramangwana.
Chikwata chinodaidza vhezheni yeBottlerocket iyo inotsigira akasiyana mabasa ekubatanidza kana maficha se "musiyano". Zvigadzirwa zvechivakwa zvinosanganisira zvivakwa uye zita re "musiyano."
SaJeff Barr, mukuru weAWS, anonongedza mune yake blog positi, Bottlerocket inotsigira Docker mifananidzo uye mifananidzo inoenderana neiyo Open Container Initiative fomati yemufananidzo, zvinoreva kuti ichashanda ese maLinux-based midziyo iwe aunogona kuitangira iyo.
Sekureva kwaBarr, chimwe chezvinhu zvakasarudzika zveBottlerocket ndechekuti inobvisa iyo yekuvandudza package.
Pane zvakasiyana, inoshandisa mufananidzo-wakavakirwa modhiNdezvekuti "inobvumira kukurumidza uye kuzere kudzoka kana zvichidikanwa," sekutaura kwaBarr, kubatsira kudzikisa nguva yekudzikisira uye kudzikisira kukundikana kwemaitiro nekuita kuti kusimudzira kuve nyore.
Izvi zvinopesana nezvakawanda zvinowanzoitika masisitimu anoshandisa iyo packet-ne-packet nzira. Pamwoyo peichi chiitiko chekuvandudza iri "Iyo Yekuvandudza Sisitimu", yakavhurwa sosi chirongwa chinotungamirwa neCloud Native Computing Foundation.
Sechikamu chediki dhizaini, Bottlerock inotora kubatana kwakachengeteka uye nzira yekusimbisa zvakasiyana pane zvakawanzo kuwanikwa muhurongwa-hwese masystem, maererano naBarr.
Iko hakuna SSH server inotsigira yakachengeteka kubatana, kunyangwe vashandisi vachishandisa mudziyo wakasiyana kuti vawane manejimendi ekudzora.
"SSH kuwana haina kukurudzirwa uye inongowanikwa chete sechikamu chemudziyo wekutarisa wakasiyana iwe waunokwanisa kumisikidza pazvinenge uchida wozoishandisa kugadzirisa matambudziko," Barr akanyora muchiziviso chake.
Zvinoenderana nekutumira paGitHub, Bottlerocket ine 'control' mudziyo, inogoneswa nekutadza, iyo inoshanda kunze kweiyo orchestrator mune yakasarudzika muenzaniso we "containerd".
"Mudziyo uyu unomhanyisa mumiriri weAmazon SSM iyo inokutendera kuti umhanye kuraira kana kutanga zvikamu zvegobolondo, pazviitiko zveBottlerocket paEC2," sekuzivisa. Iyo posvo zvakare inotaura kuti iwe unogona kutsiva iri "control" gaba nyore neyako.
Iyo yekushandisa sisitimu zvakare ine yekutonga mudziyo, yakaremara nekutadza, inoshanda kunze kweye orchestrator mune yakasarudzika muenzaniso we "containerd". "Mudziyo uyu ine SSH server iyo inokutendera iwe kuti upinde sewe EC2 mushandisi uchishandisa kiyi yako yeSSH yakanyoreswa muEC2. Kamwe zvakare, chiziviso paGitHub chinoratidza kuti iwe unogona kutsiva iri nyore maneja mudziyo neyako.
Bottlerocket inotarisa pane kuchengetedzeka uye kuchengetedza, ichipa yakavimbika, inowirirana, uye yakachengeteka chikuva chemidziyo-yakavakirwa pabasa, zvinoenderana nekutumira paGitHub.
AWS inochengetedza zvimwe zvinozivikanwa maficha yeako anoshanda sisitimu yakatsaurirwa kumakamuri ekugamuchira: kupinda kune iyo API yekugadzirisa yako system, ine nzira dzakachengeteka dzekunze-dze-bhendi paunenge uchidzida, zvigadziriso zvinoenderana neshanduko yekuchinja, yekukurumidza uye yakavimbika system kugadzirisa, yakagadzirirwa modeled inogadziridza uye chengetedzo ivo vanongoerekana vatama sevanonyanya kukoshesa.
AWS inozivisa kuti ichapa makore matatu ekutsigira (mushure mekuwanika kwakawanda) kweako maBotlerocket anovaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Bottlerocket: inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kugadzirisa midziyo
Kudzidza manejimendi uchishandisa wega-inomiririra yemahara uye yakavhurika sosi software
LMDE 4 Debbie ikozvino yavapo, ikozvino yakavakirwa paDebian 10 Buster